“ဝေါဟာရ အကွဲအလွဲများနဲ့ လူပြောများနေတဲ့ Ethnic Cleansing" - News @ M-Media
in သူ့အမြင် — December 12, 2017
၂၀၁၂ ခုနှစ်ကစလို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မတည်မငြိမ်တွေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာအစိုးရဟာ Ethnic Cleansing (အက်သနစ် ကလင်းဇင်း) လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်တွေကို သတင်းမီဒီယာတွေအပေါ်မှာ ဆက်တိုက်တွေ့မြင်လာရတယ်။ တချို့က “ဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်မှ Ethnic Cleansing ဆိုတဲ့အသံထွက်လာတယ်၊ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ အပြောခံရတယ်“ လို့ ထင်ကောင်းထင်ကြပါလိမ့်မယ်။
သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကောက်ကြည့်တဲ့အခါ ဦးနေဝင်းခေတ်ကစပြီး ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ မြန်မာအစိုးရတိုင်းဟာ Ethnic Cleansing လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ ကင်းတယ်လို့ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်တွယ်လာခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူနည်းစုတွေအပေါ် Ethnic Cleansing လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာ က အသိအမှတ်ပြုထားတာ ရာစုနှစ်ထက်ဝက်နီးပါး ရှိပါပြီ။ ဥပမာ အမေရိကန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုလုပ်ခဲ့တဲ့ “Burma Freedom and Democracy Act of 2003” က သက်သေ တခုပါ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်စပြီး သန္ဓေတည်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဥပဒေ Section 2. Paragraph (6) မှာ
… နအဖ အစိုးရက ကရင်၊ ကရင်နီ နဲ့ ရှမ်း လူမျိုးစုတွေအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူနည်းစုတွေအပေါ် လူသားများအပေါ်ရာဇဝတ်မှု (Crime Against Humanity) ကျူးလွန်ရာရောက်တဲ့ Ethnic Cleansing တွေ လုပ်နေပါတယ် … လို့ ထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်။
Section 2. Paragraph (7) မှာ
… နအဖ အစိုးရရဲ့ Ethnic Cleansing လှုပ်ရှားမှုကြီးဟာ အစဉ်အလာအရ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ယှဉ်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ၊ မွတ်စလင်တွေ၊ ခရစ်ယာန်တွေ၊ နဲ့ မိရိုးဖလာကိုးကွယ်မှုတွေကို လက်ဆွဲယုံကြည်သူတွေအကြား ဆန့်ကျင်မှုတွေနေဖြစ်တယ် … လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
လိုရင်းကို ခပ်တိုတိုလေး ဗမာလို ပြန်ရေးလိုက်တာပါ။ ဆိုလိုချင်တာက အရင် စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း Ethnic Cleansing လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဆွဲချက်ကို အခြေခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခဲ့တာပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်လို မူရင်းကို အောက်မှာ စာကြွင်းအဖြစ် ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
အထက်မှာ Ethnic Cleansing (အက်သနစ် ကလင်းဇင်း) ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ဗမာလို ဘာသာမပြန်ဘဲ အင်္ဂလိပ်လိုသာ ရေးခဲ့တာကို သတိပြုမိမှာပါ။ မြန်မာမီဒီယာတွေအကြားမှာ ဒီဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းကို ဗမာ လို သုံးနှုန်းတဲ့ အခါ ကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပါတယ်။ မီဒီယာ အတော်များများကလည်း တသက်မှတ်တည်း မရေးဘဲ အဆင်ပြေသလို အမျိုးမျိုးရေးနေတာလည်း ရှိပါတယ်။ Ethnic Cleansing ကို မြန်မာ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ လူမျိုးစုအလိုက် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှု၊ လူမျိုးတုံးရှင်းလင်းမှု ၊ လူမျိုးစုအလိုက် ရှင်းလင်းမှု၊ လူမျိုးစုရှင်းလင်းမှု၊ လူမျိုးစု သန့်စင်ရှင်းလင်းမှု၊ လူမျိုးစု သန့်စင်မှု၊ လူမျိုး သန့်စင်မှု၊ လူမျိုးတုံး သုတ်သင်ရှင်းလင်းမှု၊ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု၊ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်သန့်စင်မှု၊ လူမျိုးရေး သန့်စင်မှု၊ လူမျိုးရေး ရှင်းလင်းမှု၊ လူမျိုးသန့်စင်ရှင်းလင်းရေး လုပ်ဆောင်မှု၊ လူမျိုးတုံး ရှင်းထုတ်သတ်ဖြတ်မှု၊ လူမျိုးစု သန့်စင်ပစ်မှု လို့ ဖော်ပြကြပါတယ်။
ကွဲလွဲနေတဲ့အထဲမှာ တချို့ အသုံးအနှုန်းတွေက Genocide (ဂျီနိုဆိုဒ်) ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ သွားတူနေတာတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။ Ethnic Cleansing ကို “လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု” လို့ ဘာသာပြန်တာဟာ နားလည်မှု လွဲမှားစေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဗမာလို ဘာသာပြန်မှာပါတဲ့ ‘လူမျိုး’ ဆိုတာကို ‘လူမျိုးစု’ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း-မပြုခြင်း သို့မဟုတ် ‘တိုင်းရင်းသား’ ဟုတ်ခြင်း-မဟုတ်ခြင်း ဆိုတဲ့ ရှုဒေါင့်ကနေကြည့်ကြပါတယ်။ Ethnic ကို ဗမာလို ‘တိုင်းရင်းသား’ လို့ ရောထွေပြီး ဘာသာပြန်တာတွေ ရှိတဲ့အတွက် Ethnic ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့အတူ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်ခြင်း-မဖြစ်ခြင်းကို ဆွဲထည့်ပြီး စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် Ethnic Cleansing အထ မြောက်ခြင်း – မမြောက်ခြင်း ရှုဒေါင့်ကို အရင်မသုံးသပ်ခင် လူမျိုးစုဖြစ်ခြင်း မဖြစ်ခြင်း မှာတင် ရောထွေးလေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။
နောက်တခုက “တုံး” ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ။ အလွယ်တကူပြောရရင် အများစုက ဒါကို “မျိုးတုံးတယ်”၊ “မရှိတော့ဘူး” ဆိုတဲ့ သဘောအဖြစ် မှတ်ယူကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် “လူမျိုးတုံး” လို့ ပြောရင် “လူမျိုးမရှိတော့ဘူး” လို့ အဓိပ္ပါယ်ပေါက်စေပါတယ်။ တဆက်တည်း နောက်ပိတ်မှာပါတဲ့ ‘သတ်ဖြတ်မှု’ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကြောင့် Genocide နဲ့ အထင်လွဲစေပြန်ပါတယ်။
-cide ဆိုတာ လက်တင်ဘာသာစကားက ဆင်းသက်လာပြီး သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်သူ နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဝေါဟာရတွေရဲ့ နောက်ပိတ်စကားလုံးအဖြစ် တွဲသုံးပါတယ်။ ဥပမာ -Suicide, Homicide, Genocide, Pesticide, Fungicide, Bactericide, Cytocide အစရှိတဲ့ သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဝေါဟာရအဖြစ် သုံးစွဲပါတယ်။
ဒါကြောင့် Genocide ဆိုတာကို “လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု” လို့ ဘာသာပြန်ရင် သဘာဝကျပေမယ့် Ethnic Cleansing ကို “လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု” နဲ့ ရောထွေလိုက်လို့ မရပါဘူး။ ဒါဆို Ethnic Cleansing ဆိုတာ ဘာလဲ။ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု မဟုတ်ဘူး ဆိုရင် ဘာလဲ။
ဒါကိုမပြောခင်မှာ ဒီလို ဝေါဟာရ သုံးစွဲမှု မှားတဲ့အပေါ် အမြင်တွေ ဘယ်လို ကွဲလွဲစေသလဲဆိုတာကို ဥပမာအနေနဲ့ ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
“မြန်မာအစိုးရဟာ Ethnic Cleansing လုပ်နေတယ်”လို့ ပြောတာကို မြန်မာ့မီဒီယာတွေက
“မြန်မာအစိုးရဟာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်နေပြီလို့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေက ပြောဆိုနေကြပါတယ်” လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြကြတယ်။
“လူလေး ၃-၄၀၀ လောက်သေတာများ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ စွပ်စွဲရအောင် အဲဒီယူအန်ကလူတွေ၊ ပညာရှင်ဆိုသူတွေ ဦးနှောက်ရှိသေးရဲ့လား” လို့မေးခွန်းထုတ်ကြတာ မကြာခဏကြားဖူးပါတယ်။ “လူမျိုးတုံးမသွားဘူး“ ဆိုတဲ့ တုန့်ပြန်သံတွေထွက်လာတယ်။
ဒီတုန့်ပြန်သံတွေကို အင်္ဂလိပ် လို မီဒီယာမှာပြန်ရေးတဲ့အခါ “မြန်မာတွေက Ethnic Cleansing မဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းနေကြပါတယ်”လို့ ရေးပြန်တယ်။
အဲဒီ အင်္ဂလိပ်လို သတင်းတွေ ဖတ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားတွေက “လူ သန်းနဲ့ချည် အိုးစွန့်အိမ်စွန့် ဒုက္ခသည်တွေဖြစ်နေတာတောင် အခုထိ ဖုံးကွယ်နေတယ်၊တော်တော် မေတ္တာတရား ခေါင်းပါးကြပါလား” လို့ မှတ်ချက်တွေ ချပြီး ဒုက္ခသည်တွေကို ပိုလို့တောင် သနားစိတ်ဖြစ်ကြတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီ အသုံးအနှုန်း ဝေါဟာရအပေါ် အလွဲအမှားတွေဖြစ်လို့ မြန်မာတွေကလည်း “ကမ္ဘာ့ ပညာရှင်တွေကို ဦးနှောက်မရှိသူတွေလို့” ထင်၊ ကမ္ဘာကလည်း “မြန်မာတွေ မေတ္တာတရားခေါင်းပါးတယ်လို့” ထင်။ အလွဲကြီးလွဲတော့ တာပဲ။ [တချို့က အသုံးအနှုန်းရောထွေးလို့ မရှင်းမလင်းနဲ့ ငြင်းတာရှိသလို၊ တချို့က Ethnic Cleansing နဲ့ Genocide ကွဲပြားမှုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ပြီး ငြင်းတာလည်းရှိပါတယ်။]
လက်ရှိမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေ၊ ကမ္ဘာ့ သတင်းမီဒီယာတွေ အများစု လက်ခံအတည်ပြုထားတာက Ethnic Cleansing ပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့က Genocide (လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု) လို့ စွဲဆိုနေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
မြန်မာမီဒီယာတချို့သုံးတဲ့ “လူမျိုးစု သန့်စင်ရှင်းလင်းမှု”၊ “လူမျိုးစု ရှင်းလင်းမှု”၊ “လူမျိုးစု သန့်စင်မှု” တွေက Ethnic Cleansing ရဲ့ ဆိုလိုရင်းနဲ့ နီးစပ်မှုအရှိဆုံးပါပဲ။ ဒီမှာ “လူမျိုးစု” လို့ ပြောလို့ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခြင်း-မဖြစ်ခြင်း နဲ့ ရောလိုက်လို့ မရဘူး၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်း-မပြုခြင်းနဲ့ ရောလိုက်လို့မရဘူး။ တကယ့်ဆိုလိုရင်းက ဝိသေသတူတဲ့ လူအုပ်စု ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂကတော့ “လူမျိုးစု သန့်စင်ရှင်းလင်းမှု (Ethnic Cleansing) ဆိုသည်မှာ နေရာဒေသတစ်ခုတွင် တူညီသောလူမျိုးစုသာတည်ရှိစေရန်အတွက် ၎င်းတို့နှင့် လူမျိုးသော်လည်းကောင်း၊ ဘာသာသော်လည်းကောင်း မတူညီသည့် အခြားလူမျိုးစုအား ဖယ်ရှားစေရန်အလို့ငှာ အင်အားသုံး၍သော်လည်းကောင်း၊ ဖိအားပေးချိန်းခြောက်၍သော်လည်းကောင်း ရှင်းလင်းဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။” လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၇၈၀ မှာ “ လူမျိုးစု သန့်စင်ရှင်းလင်းမှု (Ethnic Cleansing) ဆိုသည်မှာ ပထဝီအရပ်ဒေသတနေရာရာမှ လူမျိုးစုတခုကိုသော်လည်းကောင်း၊ သာဘာဝင်တစုကိုသော်လည်းကောင်း ပြည်သူလူထုအား အကြမ်းဖက်၍သော်လည်းကောင်း၊ ကြောက်ရွံမှုများ ပေါ်ပေါက်စေခြင်းဖြစ်သော်လည်းကောင်း အခြားလူမျိုးတစု သို့မဟုတ် ဘာသာဝင်တစုမှ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်သည့် မူဝါဒဖြစ်သည်“ လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါတယ်။
ဒီ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် နှစ်ခုလုံးရဲ့ အင်္ဂလိပ်လို မူရင်းကိုလည်း အောက်မှာ စာကြွင်းအနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
Ethnic Cleansing ဆိုတာ ဥပဒေရေးရာဝေါဟာရမဟုတ်သလို သူ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလည်း တိုက်ရိုက်တရားစွဲဆိုလို့ရတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေ၊ ပဋိညာဉ်စာချုပ် ဆိုတာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Ethnic Cleansing လုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စမှာ အစိုးရက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပါဝင်လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရင် လုပ်ဆောင်တဲ့ နည်းတာတွေအပေါ်မူတည်ပြီး အခြားခေါင်းစဉ်တွေအောက်မှာတော့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံရုံးတွေမှာ တရားစွဲတဲ့အခါမှာ အထောက်အထားတွေအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတခုချင်းဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံပေါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းအတွေအနေနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို Ethnic Cleansing ကျူးလွန်တဲ့ နိုင်ငံကို သံတမန်ရေးရာအရ အရေးယူမှုတွေ လုပ်ကြပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ သဘောတူညီချက် အရ နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီဟာ သူ့နိုင်ငံအတွင်းမှာ သော်လည်းကောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာသော်လည်းကောင်း Genocide၊ War Crime၊ Crime Against Humanity ဒါမှမဟုတ် Ethnic Cleansing ကျူးလွန်တယ်ဆိုရင် လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကနေ “ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ဝတ္ထရား“ (Responsibility to Protect) ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူ့အခွင့်အရေးချို့ဖောက်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ethnic Cleansing ကျူးလွန်ရင်လည်း အကာအကွယ်ပေးရမယ့်ဆိုတဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေက ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာ အခိုင်အမာရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဥပဒေ “Burma Freedom and Democracy Act of 2003” Section 2. Paragraph (6)
“The SPDC is engaged in ethnic cleansing against minorities within Burma, including the Karen, Karenni, and Shan people, which constitutesacrime against humanity and has directly led to more than 600,000 internally displaced people living within Burma and more than 130,000 people from Burma living in refugee camps along the Thai-Burma border.”
၂။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဥပဒေ “Burma Freedom and Democracy Act of 2003” Section 2. Paragraph (7)
“The ethnic cleansing campaign of the SPDC is in sharp contrast to the traditional peaceful coexistence in Burma of Buddhists, Muslims, Christians, and people of traditional beliefs.”
၃။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ Ethnic Cleansing အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်။
The official United Nations definition of ethnic cleansing is “rendering an area ethnically homogeneous by using force or intimidation to remove fromagiven area persons of another ethnic or religious group”.
၄။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် ၇၈၀ ပါ Ethnic Cleansing အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်။
Security Council Resolution defined ethnic cleansing as “a purposeful policy designed by one ethnic or religious group to remove by violent and terror-inspiring means the civilian population of another ethnic or religious group from certain geographic areas”.